Daabacaadda Dalxiis ee La Bilaabay! | Martech Zone
Daabacaadda Dalxiis ee La Bilaabay!
Axad, Juun 25, 2006 Sabti, Febraayo 20, 2016 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka dib hurdo la'aan iyo saacado badan ka dib, waxaan billaabay Resort Publications aniga iyo saaxiibkey, Chris Baggott. Fikraddu waa wax Chris uu ka fikiray laakiin waxaa la iiga hadlay waxyaabo badan oo ka mid ah qoraaladayda. Xawaaraha iyo gogosha webka (blogging) ayaa wali ku socota kor u kaca. Internetku waa nooc la mid ah in meel bannaan laga fiiriyo… qolka loogu talagalay goobaha dheeraadka ah waa mid aan dhammaad lahayn oo dhakhso iyo dhakhsoba u koraya. Maaddaama shabakaddu sii kordheyso, makiinadaha raadinta waa inay noqdaan kuwo aad u adag oo bogaggu waa inay si adag oo adag ugu dagaallamaan feejignaanta
Waxaan rumeysanahay in jawaabta tan ay tahay mid ku soo uruurineysa feejignaan iyada oo loo marayo is-daabicid. Blogs waa jawaabta saxda ah tan maxaa yeelay waa la shaqsiyeeyay. Sarbeebta aan wali ku sii adeegsanayo dadka ayaa ah inay ku kala duwan yihiin calaamadeynta bakhaarkaaga hortiisa ama aadida iyo salaanta. Inta badan bogagga shabakaddu waa uun 'calaamado'. Uma oggola dadka waawayn inay arkaan dadka ama sheekada ka dambeysa degel. Blogs-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad la hadasho dadka waawayn waxayna u oggolaadaan inay dib ula hadlaan.
Dalxiisyada Dalxiis ee loo yaqaan 'Resort Publications' waxay ku kulmaan dhammaan dhinacyadaas hal goob ah. Waa mowduuc (Dalxiisyo). Waa gobol (waxaa lagu kala saaraa waddan iyo goob). Waana mid shaqsiyadeed… oo ay qoreen dadka iska leh meesha loo dalxiis tago ama dadka ku booqday halkaas. Waxaan rajeyneynaa natiijada ugu dambeysa inay tahay degel bilaash ah oo caan ah.
Tags: compendiumdaabacaadda miciinkamakhaayadaha loo dalxiis tagodalxiisyada
Maahmaahyo iyo Maareyn wax soo saar